चारैतिर दिदीको बिरोध भएपछि, नवराजकी प्रेमिका मल्लका भाइले दिदीको बारेमा आक्रोस हुदै बल्ल बोले वास्तविकता, दिदीको पेटमा बच्चा छैन तर हाम्रो घर घेर्न आउने केटाहरुलाई कुटेकै हो (भिडियो) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/चारैतिर दिदीको बिरोध भएपछि, नवराजकी प्रेमिका मल्लका भाइले दिदीको बारेमा आक्रोस हुदै बल्ल बोले वास्तविकता, दिदीको पेटमा बच्चा छैन तर हाम्रो घर घेर्न आउने केटाहरुलाई कुटेकै हो (भिडियो)
चारैतिर दिदीको बिरोध भएपछि, नवराजकी प्रेमिका मल्लका भाइले दिदीको बारेमा आक्रोस हुदै बल्ल बोले वास्तविकता, दिदीको पेटमा बच्चा छैन तर हाम्रो घर घेर्न आउने केटाहरुलाई कुटेकै हो (भिडियो)
रुकुम जाजरकोट घटनाले मुलुकमा एउटा तरंग ल्याएको बेलामा त्यो घटनाका बारेमा विभिन्न कुरा आइरहेका छन् । गृहमन्त्रालयको सहसचिव स्तरिय टोलीले घटनाको छानविन पनि गरिरहेको छ । शुक्रवारवाट समितिले छानविन सुरु गरेको छ । गत जेठ १० गते भएको सो घटनामा ६ जनाको ज्यान गएको छ । रुकुमवाट ठूलो हुल आएको देखेपछि नवराजको प्रेमिका भनिएकी युवतीका वुवाले वडाध्यक्षलाई फोन गरे । सो घटनाका बारेमा आफुले देखेको कुरा बताउँदै युवतीका भाई लक्ष्मण मल्लले भनेका छन्, यस अघि पनि नवराज घरमा आइसकेका कारण उनलाई आफुले चिनेका थिए । दिदीलाई लिएर नवराजले यस अघि पनि लफडा गरिसेका थिए ।
उनलाई जेठ १० गतेको घटना हुनुअघि पनि समातेर प्रहरीलाई बुझाइएको थियो । त्यसैले ठूलो हुल सहित फेरी नवराजलाई आएको देखेपछि आफ्नो वुवाले नजिकै घर भएका वडाध्यक्षलाई फोन गरेर सुनाए । वडाध्यक्षले आफुले प्रहरीलाई खबर गर्ने बताएका थिए । उनीहरुलाइ आफ्नो घर नजिकै देखेपछि युवतीको आमाले पनि उनीहरुलाई लकडाउको बेलामा किन यता आएको ? भनेर प्रश्न गरेको बताए । आमाको यस्तो प्रश्न सुनेपछि नवराजको साथीहरुले काफल खान आएको हो भनेर जवाफ दिएका थिए ।
यस्तो कुरा हुँदै गर्दा एक जना युवाले नराम्रो शब्द बोलेर गा’ली गर्न सुरु गरेको युवतीका भाईले बताएका छन् । त्यसपछि केही वि’वाद भएको उनको भनाई छ । आमासंग त्यसरी विवाद पछि उनीहरु फर्केर गएर विनोद मल्लको घरमा पुगेको पनि आफुले थाहा पाएको बताए । उनीहरुले विनोद मल्लको घरमा गएर विनोद कहाँ छ ? भनेर सोधेका थिए । ठूलो हुलमा आएका युवाले विनोद मल्ल कहाँ छ ? भन्दै सोध्दै हिडेको देखेपछि गाउँलेले सल्लाह गरेर प्रहरीलाई खबर गरेर पक्राउ गर्ने भन्दै गएको उनले बताए ।
त्यतीबेलै खसी का ट् नेहरुको पनि समुह आएको देखेपछि उनीहरु आफुहरुलाई नै आ क्रम ण गर्न आएको होला भन्ने ठानेर भागेको उनको भनाई छ । उनले तीन तिर गाउँले गएपछि ति युवाहरु भेरीमा हाम फालेको हुनसक्ने बताए । वारम्बार दुख दिएका कारण केहीलाई गाउँलेले अलि अलि हा’नेको भने स्वीकार गरेका छन् । पटक पटक गाउँमा आएर ध’म्की दिने, ववाल गर्ने गरीरहेका थिए । त्यही भएर गाउँलेले भेटेका केहीलाई भने अलि अलि हा’नेका हुन् उनले भने । समात्न सकेकाहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताए । उनले युवाहरुलाई हँ’सिया, ढुं’गाले हा’नेको भनिएको कुरा भने झुटो रहेको बताए । कसैको हातमा केही थिएन किन हान्नु ?
बारम्बार केटा आएर वि’वाद गर्न थालेपछि बुवा र परिवारका सदस्यले दिदीलाई तिम्रो प्रेम छ भनेर सोधेको बताएका छन् । उनले आफ्नो दिदीको नाममा धेरै फेसवुक आइडि बनाएर चरित्र ह त्या गर्ने काम भइरहेको बताइरहेका छन् । नवराजको आमाले छोराको बच्चा युवतीको पेटमा छ भनेर गरेको दावी प्रति पनि उनले खण्डन गरेका छन् । उनले त्यस्तो आरोप नलगाउन भनेका छन् । लकडाउन खुलेपछि २ सय केटा ल्याएर तेरो परिवारका सबै सदस्यलाई मा र्छु भनेर दिदीलाई नवराजले ध’म्की दिएको दावी उनका भाईले गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस बिरुद्ध जडिबुटीबाट तयार पारिएको औसधी सफल।नेपालमा बनेको यस औसधीले १३५ जना निको भइसकेका छन्